बाढीको बितण्डा : देशभर कहाँ के भयो ? | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-06-20T09:17:10.875948+05:45
बाढीको बितण्डा : देशभर कहाँ के भयो ?
बाढीका कारण तुल्सीपुरमा २ जनाको मृत्यु, करोडौंको क्षति
तुलसीपुर – शुक्रबार रातीदेखि परेको अबरिल बर्षातका कारण पश्चिम दाङमा मानविय क्षतिसँगै ठूलो धनजनको क्षेति पुगेको छ । बर्षातका कारण एक जना महिलाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौ घरहरु भत्कीएका छन् भने सर्यौ पशुचौपाया मरेका छन् ।
बर्षातपछि तुईखोलामा आएको बाढीका कारण तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १३ सिमलखुटीमा डुबानमा परेको घर भत्कीदा च्यापीएर ४८ बर्षिया भगवती सुनारको मृत्युभएको हो । मृतक सुनारको शव पोष्टमार्टमका लागि राप्तीअंचल अस्पताल तुलसीपुरमा ल्याएको छ ।
त्यसैगरी तुलसीपुर ७ वेतनी खोलाले एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर ४ जीतपुर निवासी ५८ बर्षका नरबहादुर रावत रहेको प्रहरीले बताएको छ । रावतलाई शनिबार दिउसो खोला तर्नेक्रममा बाढीले बगाएको थियो ।
त्यसैगरी दंगीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा ४३ वटा घरगोठ भत्कीएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीुरका प्रहरी नायब निरीक्षक विवेक शाहले जानकारी दिए । यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ८ दुधेना स्थित चमीखोलामा आएको बाढी, कुखुरा फर्ममा पस्दा करिब ३ लाख बढिको क्षेति पुगेको छ ।
त्यस्तै अबिरल बर्षातले सर्यौ विघाहा क्षेत्रफलमा लगाएको मकैबालीमा क्षेति पुर्याएको छ । मोतिपुर, उरहरी, बेलटाकुरा, टरीगाउँ, जसपुर, लगाएतका स्थानमा सयौंविघाह जमिनमा लगाको मकैबाली ढल्दा किसानहरु चिन्तीत भएको वडा नं १२ नम्बर वडा अध्यक्ष श्याम डाँगीले जानकारी दिए । ‘खाने बेला भइसकेका मकै ढल्दा किसानहरु चिन्तीत भएका छन्–अध्यक्ष डाँगीले भन्नुभयो –‘पुरै बारीमा लीर्को लगाएको जस्तो छ ।’
तुलसीपुर घोराही सडक अवरुद्ध
बर्षातका कारण तुलसीपुर –घोराही सडक खण्डको मोतिपुरमा बाढीले ह्युमपाइप सहित सडक कटान गर्दा विहानै देखि सडक अबरुद्ध बनेको छ । दैनिक एक हजार बढी सवारीसाधन होरदोहर गर्ने सडक बाढिले कटान गर्दा यात्रुहरुले शनिबार दिनभर हैरानी खेप्नु परेको थियो ।